Dowladda Federalka oo Kenya u gudbisey warqad dacwad ah - Awdinle Online
Dowladda Federalka oo Kenya u gudbisey warqad dacwad ah
Wasaaradda arrimaha dibedda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirka Kenya u fadhiya Muqdisho Danjire General Lucas Tumbo, si loogu gudbiyo cabasho ka dhan ah dowladdiisa, waxaa sidaas lagu sheegay qoraal caawa kasoo baxay wasaaradda.
Tumbo ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibedda ee Muqdisho kula kulmay wasiiru-dowladda arrimaha dibedda Cabdulqaadir Axmed Kheyr Cabdi, oo u dhiibay cabasho ka dhan xadgudub ay diyaarad Kenyan ah ku sameysay hawada Soomaaliya, 5-tii October.
Diyaaradda, oo sidday siyaasiyiin Soomaali ah oo ka yimid Nairobi, ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha Kismaayo, ayada oo aan wax fasax ah oo rasmi ah ka haysan dowladda Soomaaliya.
“Soomaaliya waxa ay aad uga soo horjeeddaa xadgudubkan, mana aqbali doonto xadgudub kasta oo lagu sameeyo xuduudaheeda hawada, badda iyo dhulka” ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibedda.
“Soomaaliya waxa ay ka dooneysaa Kenya inay ka jawaabto xadgudubkan, xilli ciidamadeeda jooga gobolka Jubbada Hoose, ay qeyb ka yihiin Amisom” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxay ficilkan u aragtaa mid burinaya mabaadi’ida deris wanaagga iyo faro-gelin la’aanta arrimaha gudaha ee dalalka kale.”
Previous articleShariif Sheekh oo dignin u diray Dowlada fedraalka Soomaaliya
Next articleIsku Dheeltirka Xilka, Darajada iyo Aqoonta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed